यस्तो बनोस् दशैं-तिहार ! - साक्षी खबर यस्तो बनोस् दशैं-तिहार ! - साक्षी खबर
यस्तो बनोस् दशैं-तिहार !
असोज २८, २०७७ | ४२० पटक पढिएको
नेपालीहरुको मनमा दशैं तिहार सलवलाई हरेको छ । कोही दाजुभाइ घर, देशमा हुनुहुन्छ होला, कोही दाजुभाइ परदेशमा हुनुहुन्छ होला, कुनै विपत् आपतमा हुनुहोला, सुखमा हुनुहोला जहाँ जस्तो सुकै रहेपनि हरेकको दिलमा दशै तिहारको सम्झना छ ।
अब हरेक नेपालीको घरघरमा जौं, मकै छरेर जमरा उमार्ने दिन आउँदैछ । घर आँगनभरी सयपत्री हजारी फुलहरु फुलीरहेका छन् । घर, गोठहरु लिपपोत गरी सफा र चिटिक्क पारिदै छ भने नेपालका सबै गाउँ ठाउँ सहरदशैं तिहार हर्षोल्लासमय बन्दैछ । नेपालीहरुको संस्कार रिति तिथी नौ दुर्गा माताको नाममा घटस्थापनाका दिन जौ, मकै छरेर जमरा उमार्ने शीरमा लगाउने प्रचलन परापूर्वकालदेखि चली आएको चलन हो । हाम्रो संस्कार अनुसार नौ दुर्गा भगवतीको नाममा घरघरमा जमरा राख्ने प्रचलन र भगवतीलाई चढाइसकेपछि टिकासँग शीरमा लगाइन्छ । यसो गर्दा मानिसमा सौभाग्य प्राप्त हुने, बल बुद्धि बढ्ने सकारात्मक सोचको विकास हुने कुराको हाम्रो संस्कारले दिएको छ ।
म भन्छु कि हाम्रा पुर्खा, हाम्रो संस्कार, जसले दशैं, तिहार पर्व बनाए जमरा लगाउने शीरमा (माथ) शिउरिन प्रचलन निर्माण गरे, आज विज्ञानले पनि प्रमाणित गर्यो कि जमराको जुस पिउनाले मानव शरीर बलियो हुन्छ र जस्तो सुकै अवस्थामा पनि रोगसँग प्रतिकार गर्न सक्छ ।
अहिले त झनै जौको जमराको ठूलो महत्व बढिरहको छ । जमराको जुस सेवन गर्ने हो भने जस्तो सुकै रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति शरीरमा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकले समेत प्रमाणित गरिसके । आज विषाक्त संसार निर्माण भईरहेको छ । मानिस अनजान या बढी मुनाफा गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्य बोकी हाम्रो नेपालीको खाना, आहार विहार पनि विषाक्त बनिरहेको छ । यसै कारणले गर्दा अब मानिसको स्वास्थ्य ब्रोइलर कुखुरा जस्तो बन्ने कुरा जारी छ । हाम्रो खानामा सुधार नगरेमा त्यो दिन नजिकै आइरहेको छ । यस्तै विषाक्त उत्पादन र खानका कारणबाट प्रेसर हाइ, दम, क्यान्सर, मुटुरोग र अहिले आएर कोरोना रोग देखा परी संसार खाइरहेको छ । त्यसैले म भन्छु कि हाम्रा पुर्खा, हाम्रो संस्कार, जसले दशैं, तिहार पर्व बनाए जमरा लगाउने शीरमा (माथ) शिउरिन प्रचलन निर्माण गरे, आज विज्ञानले पनि प्रमाणित ग¥यो कि जमराको जुस पिउनाले मानव शरीर बलियो हुन्छ र जस्तो सुकै अवस्थामा पनि रोगसँग प्रतिकार गर्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो दशैं तिहार पर्व महान रहेछन् ।
जमराकै कुरो उठ्दा बेसार, पानी, टिमुर, लहरे गुर्जाेको पनि लेख्न मन लागि हाल्योा । देशका प्रधानमन्त्री ज्यूले बेसार पानी लगायत आयुर्वेदिक जडिबुटीको सेवन गर्नाले कोभिड–१९ ले मानव स्वास्थ्यमा आक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो । कतिपय महानुभावहरुले यस कुराको हदैसम्म खिल्ली उडाउने काम गरे । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले बोलेको कुरा आयुर्वेदिक डाक्टरले आज सबै प्रमाणित गरिदियो कि, बेसार पानी, टिमुर, लहरे गुर्जाे सेवन गर्दा मानिसलाई कोभिड(१९ ले आक्रमण गर्न सकेको छैन । हामी नेपालीको घर आँगनमा पाइने घिरौला पनि तरकारी खानाले कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्न सक्दैन र शरीरमा रोगसँग लाड्ने क्षमता बढाउन मद्धत पुग्ने गर्दछ । यी कुराको अनुसन्धान आयुर्वेदिक विज्ञानले गरिरहेको छ । यी यस्ता कुराको खोज अनुसन्धान गर्न हामी लागि पर्ने बानीको विकास गरेमा मात्र हाम्रो समस्या दुर हुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो मनोबल उच्च र बलियो राख्नु पर्दछ ।
अर्काे कुरा प्रधानमन्त्री ज्यूले रामको जन्मभूमि नेपालकै अयोध्या भन्ने ठाउँमा नै हो भन्ने कुरा भनि सक्नु भएको छ । हुन पनि अयोध्यापुरी नेपालमा पनि छ, कोशी नदीको तीरमा श्रीलङ्का टापु पनि छ । वाल्मिकी ऋषिको आश्रम पनि नेपाल मै पर्दछ । गौतम बुद्ध पनि भारतमा जन्मेका हुन भने भारतले दावी गरेकै कुरा हो । आज ती कुरा सबै गलत सावित भएका छन् । त्यस्तै राम नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने कुरा बोलेपछि सत्य प्रमाण जुटाउनु परेन र ? कि रावणको राज्य पनि श्रीलङ्का देश नभई नेपालकै कोशी नदीको श्रीलङ्का टापु हो । यो कुराको चुरो आज नेपाली जनमानसमा छाईसकेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालकै हो भनि नक्सा सार्वजनिक गरियो, यस कामका लागि नेपालीलाई गर्व छ, र उच्च सम्मान छ, एमसिसिको कुरा पनि देशमा गुन्जिरहेको छ । अवश्य पनि सदनबाट पास हुन्छ होला । आज प्रत्येक नेपाली ४१ हजार विदेशी ऋणको भारी बोकीरहेका छन् । तर नेपाली जनतालाई एमसिसि आएर समृद्धि हासिल हुन्छ, भन्ने पटक्कै विश्वास छैन । विश्वास त नेपाली जनताले कुलमान घिसिङ ज्यूलाई गरिरहेका छन् । उहाँले त अध्याँरो नेपाललाई उज्यालो नेपाल बनाउने काम गर्नु भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ज्यू पुष्पकमल दाहाल बोल्नु भएको हो । नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउन सकिन्छ, यो कुरा उहाँले जायज बोल्नु भएको रहेछ । किनकी आज त्यो कुरा कुलमान घिसिङ ज्यूले प्रमाणित गरिदिनु भयो । कपटी मन नभएर इच्छा शक्ति जगाई देश र जनता प्रति बफादार स्वाभिमानी नेपाली बनी काम गरे यो देश उभो लाग्छ कि ? आज अमेरिकाको राष्टूपतिसँग आफ्नो नीजि घर छैन । यहाँ नेपालमा ऐस आराम, बंगला, बैंक व्यलेन्स, मोजमस्ति, विदेशी दारु सेवन, छोट्टी भट्टी गर्ने कामले कैले देश उभो लाग्ला ? जनता कहिले सुखी होलान् यो कुरा बुझ्ने की ? अलि फरक प्रसंग बाहिर गायो कि, क्षमा पाउ महानुभाव ज्यूहरु ।
आज दशैं तिहार घरको आँगनी डिलमा आइपुगेको छ । सबै नेपाली हर्षले रम्ने बेला हो । अहिलेको दशैं तिहार त्यस्तो हुने अवस्थामा देखिएन । कोभिड-१९ का कारणले देशको शासन प्रणाली असक्षम, सबै नेपाली दाजुभाइ घरदेशमा आउने बेला आज रुदै आमबुवा घरपरिवार सबैलाई छोडेर पेट पाल्नका लागि दिन प्रतिदिन मुगलान पसि रहेका छन् । आजभोलीको महामारी रोग कोरोनाको डर भन्दा पनि भोकै मरिन्छ कि भन्ने डरमा बाचेका छन् नेपालीहरु । यी कुराहरु देश हाँक्छौं भन्नेले कहिले बुझ्ने हो । गरिब नेपाली झन् झन् गरिब बन्दै छ । धनीहरु झन् झन् धनी बन्दै छन् । गरिबीहरु विहानदेखि बेलुकासम्म पसिना बगाउँदा पनि धन कमाउन र आफ्नो छाकवास बनाउन सकिरहेका छैनन् । धनीहरु रातारात धन कमाएर स्मार्ट जीवन जिइरहेका छन् । कहाँबाट आउँछ वर्षिन, यसको मुल कहाँ छ, यो एउटा जिज्ञासा बनिरहेको छ । नेपालमा धेरै कालहरु आए, किराँत काल, लिच्छबि काल, मल्ल काल, राणा काल, शाहकाल यी भन्दा पनि पहिलो पनि कुनै काल हुँदो हो । अहिलेको काल भनेको गणतन्त्र काल हो । यो काल पनि सिरिप दालाली गर्नेको लागि आयो, गरिब नेपाली र सजन नेपालीको लागि आएन । झन् झन् नेपालीले दुख भोगिरहेका छन् । देश हाँक्छौं भन्नेहरु मोज मस्ति गरी हिरो बनिरहेका छन् ।
तपाई हामीलाई याद छ, चाइनामा लकडाउन गर्नाले कोभिड-१९ बन्द भयो, अमेरिकाले लकडाउन नगर्नाले संसारमा सबैभन्दा बढी मानिस खायो, यो कुरा त सत्य सावित नै छ । त्यसैले आफु सचेत बनौं, जुन र जस्तो अवस्थामा छौं, हामी नेपालीको एउटा साझा पर्व दशैं तिहार सरल र सभ्य तरिकाले मनाउने बानीको विकास गरौं ।
यस्तो बनोस् देशैं तिहार नेपालमा एउटा बहुजाति बहुभाषि, बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । यहाँ १३६ भन्दा बढी भाषाभाषी बोलिन्छ । त्यसैले त अहिलेको संविधानमा बहुल्यता र समावेशी छ । यसै अनुरुप हाम्रो दशैं तिहारलाई एउटा कुनै धर्म न जात विशेषको बनाइनु हुँदैन । दशैं तिहारलाई साझा सामाजिक पर्वका रुपमा मनाउनु पर्दछ । त्यसैमा सबै नेपालीको हित छ । आज जस्तोसुकै अवस्थामा हामी नेपालीहरु जिइरहेका छौं । कोभिड-१९ ले हामीलाई पछ्याइरहेको छ । भौतिक दुरी, सामाजिक दुरी अपनाएर दशैं तिहार मनाऔं । तपाई हामीलाई याद छ, चाइनामा लकडाउन गर्नाले कोभिड-१९ बन्द भयो, अमेरिकाले लकडाउन नगर्नाले संसारमा सबैभन्दा बढी मानिस खायो, यो कुरा त सत्य सावित नै छ । त्यसैले आफु सचेत बनौं, जुन र जस्तो अवस्थामा छौं, हामी नेपालीको एउटा साझा पर्व दशैं तिहार सरल र सभ्य तरिकाले मनाउने बानीको विकास गरौं । दशैं तिहारको सबै महानुभावहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना । यो दशै तिहारले नेपालमा श्री कुलमान घिसिङ जस्तोअसल मानव देओस् यही छ । छिल्लीकोट कालिका मालिका भगवतीको कामना जय दशैं तिहार ।
कोरोना डायरी, भरिया सांसद ज्यूहरु…..
लकडाउनको एक महिना : सहज बन्दै संक्रमण, सुनसान छ कोरोना हेलिप्याड
पश्चिम दाङमा माहामारीमा युवाहरुको अग्रसरता